Kukhunjulwe umlando waKwaMashu | Isolezwe
Kukhunjulwe umlando waKwaMashu
Izindaba / 30 November 2018, 07:00am / PHILI MJOLI
ISAKHAMUZI esidala elokishini KwaMashu uMnuz Obed Mbatha ekhuluma emgubhweni weminyaka engu-60 kwasungulwa ilokishi KwaMashu. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
IMITHETHO eyayishaywe yidlanzana labamhlophe elawula isibalo sabantu abasendaweni ethize yize yayingemihle kodwa yayenza ukuthi kwazeke ukuthi bangaki abantu abahlala kuleyo ndawo, kungafani namanje njengoba sekuyikampunzi edla emini.
Lokhu kushiwo yisakhamuzi esidala saKwaMashu uMnuz Obede Mbatha (77) obekhuluma emcimbini wokugubha iminyaka ewu-60, kwasungulwa leli lokishi, izolo, othe kuyadumaza ukuthi manje akekho umuntu ozazi kahle izibalo zabantu abahlala kuleli.
UMbatha othe wafika eThekwini ngo-1957, uthe abamhlophe bakha indlela yokuthi kube nesidingo sokuthi abantu abahlala ezabelweni abase besusiwe emihlabeni ababehlala kuyo emihle, babuyele emadolobheni bazosebenza, ngokusungula intela, i-poll tax.
“Kwase kumele size emadolobheni siyosebenza ukuze sikhokhe intela. Yize kwakunjalo wawungazingeneli nje edolobheni, kwakukhona KwaMuhle lapho kutholakala khona imvume yokuthi usebenzei,” kusho yena.
Uthe ngaphambi kokuthi ayohlala KwaMashu wayehlala eMkhumbane kodwa basuswa kabuhlungu balethwa KwaMashu, bakhelwa izindlu zamapulangwe abathi uma bekhishwa kuzo bafakwa ku-4 room owawuhlala imindeni emibili, kule mizi manje sekuyisesigcemeni sakwa L.
“Kule ndawo kwakunepulazi lo mlimi uSir Mashall Campell, abantu epulazini lakhe bagcina sebelinqamulela ngokuthi iKwaMarshall, bagcina sebenqamulela ngokuthi iKwaMashu,” kusho yena.
U-Edmund Mhlongo weK Cap uthe bambalwa abantu abaziyo ukuthi kungani kule ndawo kuthiwa kusesinqawunqawini.
Uthe leli gama lasuselwa ekutheni omunye womama owayedayisa ukudla waphelelwa inyama wapheka inyama yenja. Amakhasimende akhe uma ebuza ukuthi lenyama emnandi kangaka eyani, wayewaphendula ngokuthi eyesinqawunqawu.
ISIKHULU saseKcap uMnuz Edmond Mhlongo ekhuluma emgubhweni weminyaka engu-60 kwasungulwa ilokishi KwaMashu
“Cishe akekho ongasazi isisho esithi wakhala phansi okwentshebe yaKwaMashu kodwa akekho ozihlupha ngokubuza ukuthi ubani leyo ntshebe. Iqiniso ukuthi leyo ntshebe indoda eyayinentshebe eyanqanyulwa ikhanda isitimela,” kusho uMhlongo.
UNksz Jacinta Ngobese uthe intsha kumele izinuke amakhwapha ngokuphuza okwedlulele nokusetshenziswa kwezidakamizwa, okudlangile kuleli lokishi.